Pele: “Waxaan doonayaa in Neymar uu jabiyo rikoorkeyga xulka Brazil” – Gool FM
(Brasília) 18 Juun 2021. Halyeyka reer Brazil ee Pele ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo in Neymar uu jabo rikoorkiisa xulka qaranka Brazil, kaddib markii uu xiddiga PSG markale xalay gool u dhaliyey xulka.
Kaddib goolkii uu xalay ka dhaliyey xulka PEru, Neymar Jr ayaa ku sii dhowaanaya inuu noqdo xiddiga ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka Brazil.
Xulka Brazil ayaa xalay gaaray guushiisii labaad ee tartanka Copa America, kaddib markii ay 3-0 uga adkaadeen Peru, waxaana Neymar uu afar gool ee xulka Seleção ku lahaa hal gool.
Goolkii labaad ee uu xalay saxiixay Neymar Jr, kaasoo uu caawintiisa lahaa Fred ayaa ka dhigay inuu kaliya 9 gool u soo jirsado inuu noqday laacibka ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka Brazil.
Haddii uu Weeraryahanka PSG ee Neymar Jr uu 9 gool u saxiixo xulka Seleção, waxa uu soo barbareyn doonaa halyey Pele goolasha xulka, isagoo haddii uu gool kale ku darana noqon doona xiddiga ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka Brazil.
Neymar ayaa xalay dhaliyey goolkiisii 68-aad ee xulka Brazil, waxaana kaliya ka horreeya halyeyga xulka ee Pele oo horey xulka Seleção ugu saxiixay 77 gool.
Ronaldo ayaa isaguna booska saddexaad ku jira waxaana uu xulka Brazil u dhaliyey 62 gool, waxaana ku sii xiga Romário oo isna haysta 55 gool oo uu u dhaliyey xulka Brazil, Zico oo xulka u dhaliyey 48 gool, Bebeto (39 gool), Rivaldo (35 gool), Jairzinho (33 gool), Ronaldinho (33 gool) iyo Ademir oo saxiixay 32 gool.
Haddaba halyey Pele oo soo hadlay kulankii xalay uu xulka Brazil afarta gool afarka ka galiyey Peru ayaa sheegay inuu doonayo in Neymar uu jabiyo rikoorkiisa goolasha xulka, isla markaana uu doonayo dhoolla-caddeyntiisa oo uu jecel yahay marwalba farxaddiisa.
Sidee ayaa loo kala hoggaaminayaa tartanka kabta dahabka ah ee gool-dhalinta Euro 2020?... (Yaase caawin sameeyey?)